Taa bu ubochi nchete omumu Mazi Dr. Martin Luther King Jr
A na-akọ maka onye isi ala Amerịka, Barack H. Obama, taa. Taa ka Obama mere ịṅụ iyi ịchị obodo Amerịka afọ anọ ọzọ, maka ọlụ ọma nke ọ lụrụ n’afọ anọ nke gwụrụ ụnyịahụ. Mazị Dr. Martin Luther King Jr. bụkwa tata ka anyị nakwa echeta maka ọmụmụ ya. Nwoke mụ a bụ agụ nwoke.
Nwoke a bụ otu n’ime ndị isi ojii jiri ndụ ha chụọ aja ka ihe ọma ruta anyị aka n’ala Amerịka. Udo dịrị ya!
Ta bụ ụbọchị gị!
Tata bụ ụbọchị gị.
Ụmụ Igbo na ụmụ Amerịka na ụwa nile na-echeta ọmụmụ gị.